Mara Basque gastronomy | Akụkọ Njem
E nwere ebe dị na Spain ebe ị na-eri nri nke ọma na mpaghara ugwu bụ otu n'ime ha. Site na Galicia gaa Asturias gafere mba Basque. Na Basque gastronomy bụ nke anyị ga-elekwasị anya taa, ya mere anyị nwere ike ịhụ ụdị nri ha. Nri a, dị ka nke ọtụtụ mpaghara ndị ọzọ dị na mgbago ugwu, na-elekwasị anya ọ bụghị naanị na nri mmiri, kamakwa na ala.
Obi abụọ adịghị ya na akụrụngwa na-enyere aka na eziokwu na Basque Country anyị na-ahụ gastronomy nke na-enye ezigbo nri dị ụtọ. Ọ bụrụ n’anyị gaa ezumike n’obodo a, ọ dị mkpa ịnwale ụfọdụ nri ya kachasị ama.
1 Chika Okpala
5 Kokotxas na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ihendori
7 Squid na ink
Omenala nke obodo Basque na-enye anyị Pintxos na-atọ ụtọ, nke bụ ihe na-atọ ụtọ nke na-ejikarị mkpara na-abịa ma na-erikarị ya n'otu ahịhịa, ọ bụ ezie na ọ dabere n'ụdị skewer. Na mmanya anyị nwere ike ịchọta ọtụtụ n'ime ha ma drinkụọ ha ka ha soro zurito, nke bụ obere iko biya, cider ma ọ bụ txakoli, nke bụ mmanya ọcha si na mpaghara ahụ. Enwere adịghị agwụ agwụ pintxos na anyị kwesịrị ịnwale dị ka ya ama Gilda, nke mejuputara chili, oliv na anchovy. Ejiri skewers na-ebu cod bụ ndị a ma ama, ya na kokotxas dị ka ndị na-akwado ya, ebe ọ bụ akụkụ dị nro. Ka anyị ghara ichefu ịnwale tortilla skewer jupụtara na txaka, nke bụ nshịkọ osisi.
N'ime ụdị kichin a, a na-ebu nri dị ụtọ na-agbanwe agbanwe, dị ka nke a. Nri a bụ ihe ndị ọrụ ụgbọ mmiri ji kpọrọ ihe nke ukwuu ma bụrụ akụkụ nke ọdịnala ndị ama ama. Ejiri bonito, poteto na ose chorizo ​​mee ya, o bu efere di uto nke gha eme ka afo ju anyi. N'oge N'oge okpomọkụ mara mma dị na nnukwu oge, yabụ ọbụlagodi na ọ bụ efere dị ọkụ ọ bụ oge kachasị mma iji nwalee ya.
Nke a bụ otu n'ime Omenala ndị ọzọ anyị nwere ike ịchọta na Basque gastronomy. Ejiri cod, nke a doro anya na ọ bụ otu n'ime ihe ndị kachasị amasị ya, nke a pụrụ ịchọta n'ọtụtụ efere ndị ọzọ na tapas. O nwekwara mmanụ oliv na ose chilli. A na-akwadebekarị ya n’ite ụrọ ọdịnala.
Nri a dị ụtọ dị mma maka ụbọchị oyi. Emere ya na leek dị ka onye bụ isi ma o nwekwara poteto na cod. Efere a na-ekpo ọkụ ma enwere ndị na-ahọrọ ụdị anaghị eri anụ nke ha na-eme na-enweghị cod. Ọ bụrụ na ọ nwere ike, ha gara n’ihu n’igosi anyị na ngwaahịa nke ubi nwere ogo dị elu ebe a ma bụrụkwa ihe ndabere nke gastronomy ha.
Kokotxas na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ihendori
na kokotxas bụ akụkụ dị nro nke azụ nke dị n'akụkụ ala nke isi ma nwee ekele dị ukwuu na Basque gastronomy. A na-akwadebe kokotxas a n'ọtụtụ ụzọ ma otu n'ime ha bụ ịgbakwunye ihendori na-acha akwụkwọ ndụ nke ejiri galik na pasili mee.
El txangurro bu ududoYabụ mgbe anyị na-ekwu maka ya, anyị na-ezo aka n'efere dị ụtọ eji anụ anụ a na-ewu ewu nke ama ama n'obodo a. Otu n’ime ihe kachasị ewu ewu bụ txangurro esiri yabasị, tomato, leek, breadcrumbs na brandi.
Squid na ink
na squid ma ọ bụ squid A pụrụ ịhụ ha n'ọtụtụ gastronomies dị na mgbago ugwu, ebe ọ bụ mpaghara ala gbara osimiri okirikiri. Squid na ink ya amaraworị ụwa niile mana ha bụkwa akụkụ nke Basque gastronomy. A na-enweta ihendori na ink squid nke agbakwunye galik, yabasị na tomato.
The piperrada bụ a ndozi eji ose, nke bu ihe ozo nke kpakpando nke Basque gastronomy. A na-ejikwa ihe nkwado a na Navarra. Enwere ike iji naanị achịcha were ya, kamakwa ya na cod ama ama ma ọ bụ tuna. Ọ bụ ezigbo ntọala maka ọtụtụ nri ndị ọzọ n'ime gastronomy a.
Dị ka ezigbo gastronomy anyị hụrụ ahụkarị Grafica rụchaa ezigbo nri. Ọ bụrụ na anyị chere na na Basque Country na ha bụ ndị ọkachamara na efere mejupụtara azụ, eziokwu bụ na ha nwekwara nnukwu ato uto. Goxua bụ otu n’ime ha ma nwee ude achịcha dị iche iche, sirop, ude na pịa achicha achicha. A na-enyekarị ya na iko dị ka custard ma ọ bụ n'ụdị achicha.
La patxineta bụ ihe eji megharịa ọnụ pụrụ iche nke ejikọtara ọzọ na San Sebastián ma ọ bụkwa akụkụ nke ihe ụtọ ndị ahụ ị ga-anwale. Ngwakọta nke achịcha bekee, almọnd na ude na-emesi anyị obi ike na anyị ga-aga nke ọma, ebe ha bụ ihe ndị anyị na-ahụ n'ọtụtụ desserts. Basque gastronomy pụtara maka ịdị mfe ya na akụrụngwa dị elu nke na-eweta efere dị ịtụnanya na desserts nwere ọtụtụ ekpomeekpo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Gastronomy » Basque gastronomy